State nke Jamaica n'ime njem nleta Caribbean na ụzọ ịga n'ihu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » State nke Jamaica n'ime njem nleta Caribbean na ụzọ ịga n'ihu
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Onye minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica Hon. Edmund Bartlett kwuru na webụ webụ nke JMMB. JMMB bụ nnukwu ụlọ akụ na Jamaica.
Bartlett nyere nkọwa banyere ihe ịma aka nke njem njem Jamaica na njem nleta na echiche zuru ụwa ọnụ.
A na - edegharị okwu mmeghe a ebe a dị ka ihe ederede na ọ bara uru karịa ọnọdụ Jamaica.
Guo n'ozuzu ya - ma ọ bụ gee ntị - isi okwu a nke Minista mere na webụsaịtị JMMB's Thought Leadership.
Mgbanwe nke ụlọ ọrụ ndị njem ebe ọ bụ na 1950s nwere ike ịkọwa nke ọma dịka akụkụ dị iche iche dịka akụkụ a nke akụ na ụba ụwa n'otu oge na-egosi nkwụghachi na ngwangwa; na ma gosiputa oge obula na oke ike.
N'ozuzu, foto nke njem nlegharị anya nke mba ụwa kemgbe ọtụtụ iri afọ gara aga bụ nke uto ngwa ngwa ma na-agbanwe agbanwe ma nwee mmetụta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ndị mbata mba ụwa sitere na nde 25 na 1950 ruo 1.5 ijeri na 2019, na-eme mmụba okpukpu 56.
Ka ọ na-aga n’ihu n’ịgbasawanye ma na-agbasa ngwa ngwa, mmetụta nke njem njem mba ụwa agbatịwo na mpaghara ụwa niile na mpaghara a so n’etiti ndị na - eweta ọrụ ọrụ n’ụwa, mbelata ịda ogbenye, azụmaahịa mbupụ na mbata ndị mba ọzọ. N'ime afọ ise gara aga (pre-COVID), ndị ọrụ na-eme njem nleta na-akpata 1 ọrụ na ọrụ 5 ọ bụla emere.
Na 2019, mpaghara ahụ kwadoro ọrụ nde 330 ma ọ bụ 1 n'ime ọrụ 10 n'ụwa niile. Na 2019, njem nleta nyekwara ijeri US $ 8.9 na GDP ụwa ma ọ bụ 10.3% nke GDP; Ijeri dolla US $ 1.7 na-ebupụ na 6.8% nke mbupụ zuru ezu; 28.3% nke ọrụ mbupụ ọrụ ụwa na US $ 948 ijeri na ntinye ego ma ọ bụ 4.3% nke mkpokọta ego.
Mmetụta mmekọrịta akụ na ụba na njem nlegharị anya na-dịgasị iche gafee mpaghara yana obere akụ na ụba na-adịghị agbanwe agbanwe nke Pacific, Indian Ocean na Caribbean so na ndị kachasị njem nlegharị anya ụwa na-adabere na nkezi.
Dabere na nchoputa nke Index Dependence Tourism nke 2021 nke Inter-American Development Bank (IADB) mebere, Caribbean dị ka mpaghara kachasị njem njem na ụwa. Index ahụ chọpụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba iri na abụọ nke Caribbean tinyere Jamaica nọ n'etiti mba 20 kachasị na-adabere na njem nleta na ụwa na ọtụtụ mba ndị ọzọ dị na Latin America na Caribbean na-achịkọta 100 kacha elu.
Nchoputa ozo nke WTTC's 2020 Economic Impact Report gosiri na, tupu oge nsogbu, njem na njem nleta na mpaghara Caribbean nyere: USD 58.9 ijeri GDP (14% nke ngụkọta GDP); Ọrụ nde 2.8 (nke ya na 15.2% nke ọrụ niile) na USD 35.7 ijeri na mmefu ndị ọbịa (nke 20% nke mbupụ zuru oke).
N'ihe dị n'azụ na uto njem njem mba ụwa gafere uto akụ na ụba ụwa na 2019, amụma mbido bụ maka mmụba pere mpe nke 3 ka 4% na 2020. Nke a doro anya tupu mgbasawanye ụwa nke akwụkwọ coronavirus, bido na March 2020, nke mechara mere ka mmechi nke ókèala, ntọala nke ụgbọ elu na nkwụsị nke njem mba ụwa niile site na Eprel ruo na June 2020.